Warbixin dagaaladii maanta ka dhacay qaybo ka mid ah Boondheere iyo Xarunta Madaxtooyada oo halistii ugu weyneyd ay lasoo deristay. | Halganka Online
Warbixin dagaaladii maanta ka dhacay qaybo ka mid ah Boondheere iyo Xarunta Madaxtooyada oo halistii ugu weyneyd ay lasoo deristay.
Posted on Luulyo 19, 2010 by halganka
Waxaa maanta oo Isniin ah dagaallo ay ka dhaceen qaybo ka mid ah Degmada Boondheere kadib markii ay shalay gelinkii dambe Sariyo ka tirsan ” Liwaa Cali Bin Abii Daalib” ee ka howl gala Wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir ay gacanta ku dhigeen fariisimo Istaraatiiji ah oo ay hore u joogeen Maleeshiyada Kooxda Riddada ah sida Wasaaradii hore ee arimaha gudaha, Safaaradii Talyaaniga iyo Xarunta Degmada Boondheere.
Todobadii subaxnimo ee saakay ayay Maleeshiyo ka tirsan kooxda Riddada ah oo si kulul ay usoo canaanteen saraakiisha Saliibiyiinta Yugaandha ee ku sugan Bangigii hore ee ganacsiga waxay weerar kusoo qaadeen fariisimihii shalay laga xoreeyay, waxaana dagaal mudo kooban socday kadib Allaah fadligiis la jebshay Maleeshiyadii soo duushay.
Markii ay saacadu ahayd 4:30pm Galabta ayaa waxaa isi soo biimeeyay Ciidamada Kirishtaanka Yugaandha oo laga keenay dhinaca Airport-ka Muqdisho oo ay fariisin kuleeyihiin, waxaana hore usoo raacay Maleeshiyada Riddada ah ee ku sugan degmooyinka Wadajir iyo Dharkeenleey.
Gaalada Yugaandha ayaa waxay ku hubaysnaayeen 10 gaadiidka gaashaaman ah oo 4 ka mid ah ay ahaayeen Taangiyaal, waxayna weerar kusoo qaadeen Xarunta Degmada Boondheere, halkaas oo uu ka bilowday dagaal culus oo ay Ciidamada Mujaahidiinta ah jilibka u dhigeen Gaalada Kirishtaanka ah ee u dagaalamaysa sidii ay Diinta Islaamka u ciribtiri lahaayeen.
Allaah Fadligiis mudo hal saac ah kadib waxaa jabay ciidankii Macatab ku dirirka ahaa, kuwaas oo dib ugu baqa-cararay fariisinkii ay ka soo duuleen waxaana sii raacdaystay Ciidamadii Mujaahidiinta kuwaas oo hore uga sii siqay fariisimihii ay ku sugnaayeen.
Afhayeen Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ” Sh.C/Caziiz Abu Muscab” ayaa warbaahinta u sheegay in saamaynta ducada ay dadka Muslimiinta ah usoo ducaynayaan Mujaahidiinta ay ka muuqato fagaarayaasha dagaalka, wuxuuna ku booriyay bulshada Muslimiinta ah inay sii wadaan ducada Mujaahidiinta gaar ahaan xilliyada ay ducadu mustajaabada tahay.
Sh.Abu Muscab ayaa Ciidanka Mujaahidiinta uga digay inuu Quruur galo maadaama guulaha ay gaarayaan ay yihiin kuwo is-dabajoog ah, wuxuuna xusuusiyay in Guushu ay tahay mid ku timaada Allaah fadligiis oo kaliya, sidaas daraadeed wuxuu ku booriyay Ciidamada Mujaahidiinta ah inay xoojiyaan Cibaadada iyo ku xirnaanshaha Allaah.
Dagaalkii shalay gelinkii dambe ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Boondheere iyo fariisimaha cusub ee ay Mujaahidiintu la wareegeen ayaa waxay halis aan hore u dhicin ku tahay Xarunta Madaxtooyada kooxda Riddada ah, maadaama Ciidanka Mujaahidiinta ee goobahaas la wareegay ay si caadi ah u arki karaan cid walba oo galeysa ama ka baxaysa irida Madaxtooyada, si toos ahna u bartilmaameedsan karaan.
« Masuulka ugu sareeya Maktabka Diiwaanka Zakada oo maanta la magacaabay. Xaalada Degmada Boondheere oo degan iyo Hogaamiyihii badalay Nuur daqle oo dhaawac soo gaaray u dhintay. »